Jabilbreak maka iOS 9.2-9.3.3 dị ugbu a | Akụkọ akụrụngwa
Oge awa ole na ole gara aga, anyị gwara gị banyere mwepụta nke nwere ike iwepụ maka ogologo oge maka ngwaọrụ nwere ụdị iOS n'etiti 9.2 na 9.3.3, ụdị kachasị ọhụrụ Apple wepụtara n'izu a. Na njedebe anyị agaghị echere ụbọchị kama ọ bụ naanị awa ole na ole. Ndị China nke Pangu Ha tọhapụrụ ndị dị mkpa software na-enwe ike jailbreak na ngwaọrụ na ụdị nke iOS.
Ma, dị ka mgbe niile mgbe ụmụ okorobịa na Pangu ẹkedori a ụdị software na a ọsọ ọsọ, ọ ga-kwuru na nke a software adịghị ekwe ka ị na jailbreak kpamkpam, ma oge ọ bụla anyị Malitegharịa ekwentị ahụ na ngwaọrụ anyị ga-atụfu jailbreak, yabụ ọ bụ idozi karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ọzọkwa, Saurik ewepụtabeghị ụdị Cydia dakọtara na ụdị nke jailbreak.
Dị ka Cydia mbipute erubeghị na nke a jailbreak, anyị agaghị enwe ike ịwụnye tweak ọ bụla na ngwaọrụ ebe emechara ya. Na mgbakwunye, n'oge ha weputara sọftụwia na Chinese, yabụ anyị agaghị enwe ike ịhọrọ nhọrọ iji hazie ngwaọrụ anyị n'oge usoro a, belụsọ na anyị maara asụsụ a. Anyị nwere ike ịgbaso ụfọdụ ntuziaka ndị dị ugbu a na ịntanetị, mana ọ bụ ihe amamihe dị na ya ichere ka nsụgharị bekee wepụtara na site na Actualidad Gadget anyị ga-akọwa nzọụkwụ site na nzọụkwụ ihe nhọrọ ọ bụla pụtara.
Ọzọkwa, dị ka ọ dị na mbụ na otu a, sọftụwia dị naanị na ụdị ya maka Windows, ma ọ bụrụ na ị nwere Mac ị ga-echere maka nsụgharị ikpeazụ ka ewepụtara ma ọ bụ mepụta igwe arụmọrụ. Mana ọ bụghị naanị ya bụ nke ngwa a. Usersfọdụ ndị ọrụ na-ekwu na ọ dị mkpa ịnwe Apple ID na China iji mee nke a, ebe ọ bụ na akaụntụ sitere na mba ndị ọzọ na-akpata nsogbu na ọ naghị ekwe ka ịme ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale sọftụwia a, naanị ị ga-agafe na websaịtị nke Pangu.io inwe ike ibudata ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Jabilbreak maka iOS 9.2-9.3.3 dị ugbu a